घरेलु हतियार - Ikkaro
भनिने खण्ड खोल्नुहोस् घरेलु हतियारहरू यो गाह्रो निर्णय भएको छ। हामी लडाकू होइनौं हामी हिंसाप्रति आकर्षित हुँदैनौं तर इकर्कोको लेख समीक्षा गरेपछि हामीले महसुस गर्‍यौं कि यी बर्षहरूमा हामीले घर बनाउने धनुहरू, रेलगुन्हरू, र कार्यालय हतियारहरूको बारेमा धेरै जानकारी व्यवहार गर्‍यौं। तिनीहरू प्रयोग गर्नका लागि हतियारहरू होइनन् न पिस्टलहरू न सबमचेन गनहरू हुन्, तर तिनीहरू वर्गीकरण गर्दा हुन्, यसले हामीलाई चोट पुर्‍याए पनि।
हामी कसैलाई खराब काम गर्न हतियार बनाउन चाहँदैनौं, तर साथीहरूसँग केहि समय खर्च गर्न जो डार्टहरू खेल्छ, किनकि तिनीहरू धनुष वा पेन्सिल थ्रोरले गोली हानिरहेका छन्। यस सेक्सनमा धेरै जसो आईटमहरूले हतियार बनाउँदछन् जुन खेलौना, सिक्का प्रक्षेपणकर्ता, क्लिप क्यापल्टहरू वा बाल म्याग्नेटको साथ गौस राइफलको रूपमा लिन सकिन्छ। साधारण जिज्ञासाहरु।
त्यसकारण कुनै पनि चीजको लागि यो सेक्सनमा नहेर्नुहोस् जुन साधारण शौक होईन वा त्यो हेर्न शुद्ध जिज्ञासा भन्दा पर जान्छ कसरी निश्चित संयन्त्रले काम गर्दछ। कसले कहिल्यै ड्रेगन स्लेयरसँग खेलेको छैन? वा धनुको छडी र स्ट्रि withको साथ बनेको छ? वा क्लागमा कागज बलहरू फाल्नको लागि फ्लोगन सज्जनहरू, यी हतियारहरू हुन्, घरेलु हतियारहरू, शब्दहरूको नकारात्मक अर्थ बिर्सनुहोस्।
मलाई विश्वास छैन कि यो जानकारीले कसैलाई पनि हतियार बनाउन र खराब प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्दछ किनकि लगभग कुनै पनि वस्तु हानि गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यदि तपाईले लेख फेला पार्नुभयो जुन तपाईलाई लाग्छ कि टाढा छ, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र हामी खुशीले यसलाई समीक्षा गर्नेछौं।
कसरी घर बनाउने राइफललाई चरणबद्ध रूपमा
यहाँ कसरी एक धेरै सस्तो र विशेष गरी शक्तिशाली घरेलु राइफल बनाउने भिडियो छ। त्यसो होईन ... पढ्न जारी राख्नुहोस्
लेजर दृश्यको साथ क्लासिक स्लिंगशट
को कुरा उद्देश्यका लागि स्लिंगशटमा लेजर समावेश गर्दै यो कुनै नयाँ अवधारणा होइन, जुन यो देशमा एक हतियार खरिद गर्न मेशिनबाट सोडाको डिब्बा लिन जत्तिकै सजीलो वेबसाइटहरूमा यसलाई फेला पार्न सजिलो छ।
के यो लेखमा देखाइएको छ सामान्य सामग्रीको साथ सामान्य स्लिंगशटमा कसरी अनुकूल बनाउने भन्ने हो।
यदि तपाईंलाई स्लिh्गशटहरू मनपर्‍यो भने, म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु यो टी हेर्नुहोस्इराकी पेशेवर, दुबै प्रतिस्पर्धा र शिकार मा प्रयोग। पक्कै पनि तपाईं मायामा पर्नुहुन्छ
कसरी घर बनाउने Nunchakus बनाउन
तपाईंले सबै केहि चलचित्रहरू देख्नुभयो मार्शल आर्ट्स र तपाईं केहि चाहानुहुन्छ ब्रुस ली जस्तै शानदार Nunchakus.
ठिक छ धन्यवाद Bricogeek लेख यो धेरै सरल हुन गइरहेको छ।
ध्यान दिनुहोस्। Nunchucks को उपयोग खतरनाक हुन सक्छ, सावधानीका साथ कार्य गर्नुहोस्।
यहाँ हामी यो योजना छोड्दछौं र एक viking catapult को निर्माण। सबै प्रकारको सामग्रीको विस्तृत विविधताका साथ गर्न धेरै सरल र गर्न सजिलो।
रेल गन, जसले खेल7मा प्रक्षेपणहरू सुरू गर्दछ
La अमेरिकी नौसेना विकसित गरेको छ Railgun म्याच ex भन्दा बढि गतिको प्रति मिनेट १२ प्रक्षेपण प्रक्षेपण गर्न सक्षम छ, त्यो sound गुणा ध्वनीको गतिको छ र minutes मिनेटमा २ 12 ० माइलसम्म पुग्न सक्षम छ।
परियोजना: "रात दृष्टि" टीम गृह
यस प्रोजेक्टको साथमा मैले एउटा सिर्जना गर्ने योजना बनाएको छु घरेलु "रात दृष्टि" "टीम"। वास्तव मा एक प्रयोग को रूप मा यो धेरै राम्रो छ तर यो धेरै व्यावहारिक छैन, तपाईले देख्नु हुनेछ।
सबै भन्दा पहिले, एक सानो कुरा स्पष्ट, र त्यो हो कि मान्छे अक्सर एक भ्रमित इन्फ्रारेड दृष्टि उपकरण एक संग थर्मल भिजन टोली, जुन सबैमा समान छैन।
थर्मल दर्शन भनेको नीलो र रातो टोनको साथ फोटो हेर्नु हो, गर्मी अनुसार यो उत्सर्जन गर्छ।
र इन्फ्रारेड भिजन ग्रेस्केलमा छ, जसमा भनिएको छ कि प्रकाशलाई सेतो फ्ल्याशको रूपमा हेरिन्छ, यद्यपि मानव आँखाले यसलाई देख्दैन:
एक पटक यो सकिएपछि हामी विश्लेषण गर्नेछौं हामीलाई के चाहिन्छ:
- अवरक्त प्रकाश कब्जा गर्न सक्षम एक उपकरण
- इन्फ्रारेड लाइट उत्सर्जन गर्न सक्षम फ्ल्यासलाइट
पूर्ण लेख पढ्नुहोस्
एक गौसिया रिल निर्माण गर्न ब्लुप्रिन्टहरू
लेख विकसित र एनरिक कर्पा CI- चरम परिचय द्वारा प्रदान यी नोट्स मा तपाईं निर्माण गर्न सबै आवश्यक छ ... पढ्न जारी राख्नुहोस्
तपाईंको आफ्नै ड्र्यागन शिकारी बनाउनुहोस्
यो सप्ताहअन्तमा मैले ड्र्यागन स्लेयर बनाएको छु। यो विचार मसँग आउँदा छलफलबाट आएको थियो जुन काम गर्ने ठाउँमा हामी कसरी लडेका थियौं, मेरो साथीले बेलुनको बोतल प्रयोग गर्‍यो, तर हामीले पहिले नै छलफल गरिसकेका छौं, यसले मलाई केही गर्न सक्दैन। शिकार ड्रेगनहरू, कुल्हाडी
यो मेरो बाल्यकालको खेलौना हो। म धेरै बुढो भएँ, तर म अझै सडकको वरिपरि छु चढेको र झगडा खेलिरहेको छु।
El ड्र्यागन शिकारी हतियार हो जुन हामी ड्रेगनहरू शिकार गर्न प्रयोग गर्दछौं= geckos) यद्यपि हामीले पनि बिरालोलाई गोली हान्यौं। म जनावरहरूलाई हानि पुर्‍याउन पोष्ट प्रचार गर्दिन, किनकि ड्रेगनहरू शिकार गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ र बिरालाहरू हामीले गरेका थियौ। तर तपाईं यी खेलौना बनाउन र कुनै पनि दिन एक मिनी प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ; परिवार बीच।
यो निर्माण गर्न धेरै सरल र सस्तो छ र यसले केहि मिनेट लिन सक्दछ।
कसरी गाउस राइफल बनाउने
एक पटक Coilgun र Railgun बीचको भिन्नता, आज हामी यसमा अलि बढि जाँदै छौं कोइलगुन वा गौस बन्दूकको निर्माण गर्दै.
सबैभन्दा आधारभूत प्रणालीमा कुण्डली, प्रक्षेपण, र एक शक्ति स्रोत समावेश हुन्छ। तर मैले पत्ता लगाएका मोडलहरूसँग जहिले पनि अधिक उपकरणहरू छन्, जसले यी "खेलौनाहरू" लाई वास्तवमै आकर्षक बनाउँदछ।
Ga गउस गन डिजाइन एकल, बहु, पोर्टेबल, र द्रुत-फायर coilguns को निर्माण वर्णन गर्दछ। यो अझै व्याख्या गर्न बाँकी छ तर विचारहरूले हामीलाई मद्दत गर्न सक्दछन्।
Coilgun powerlabs द्वारा PowerLabs बाट केटाहरूले हामीलाई उनीहरूको coilgun कसरी बनाउने हामीलाई पनि देखाउँछन्, ज्यादै प्रोफेशनल पनि छ, यहाँ हामी अझ बढी घर बनाएको कुरा खोज्छौं ;-)
बन्दुक जसले पिंग प shoot्ग बलहरू गोली हान्यो
यहाँ एक जान्छ पिंग पong बल बल गन हल्का, लाह, डक्ट टेप र एल्युमिनियम वा भान्छा पन्नीको गत्ता ट्यूबको साथ बनेको। लाह वा केही अन्य ज्वलनशील सामग्री ईन्धनको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर सधैं धेरै सावधान रहनुहोस्।
यो सब भन्दा धेरै घरमा बनाइएको चीज हो जुन मैले लामो समयमा देखेको छु र अझै धेरै आश्चर्यजनक छ। मलाई यसको सरलता र प्रभावकारिताको लागि मनपर्दछ, यो ती मध्ये एक हो माटोको भाँडा जब तपाईं तिनीहरूलाई देख्नुहुन्छ, तपाईं भन्नुहुनेछ ... यो मलाई कसरी हुन सकेन ...?
मैले कलात्मक ब्राउजिंग देखेको छु र म रोबोट हुन चाहान्छु यद्यपि मैले तपाईंको भन्दा फरक भिडियो चयन गरेको छु, किनकि मलाई लाग्छ यसले दिने परिणामहरू अझ राम्रो हुन्छन्। घरेलु बन्दुक.
केहि सुरक्षा सल्लाहहरू:
← अघिल्लो पृष्ठ1 पृष्ठ2 पृष्ठ3 अर्को →